Filoha nitsidika an’i Zambie : Noraisina tamin’ny fomba manetriketrika -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloha nitsidika an’i Zambie : Noraisina tamin’ny fomba manetriketrika
Vao nigadona ny seranam-piaramanidina Kenneth Kaunda seranam-piaramanidina iraisam-pirenen’i Zambie ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina, dia noraisin’ny filoha zambianina Edgar Lungu tamin’ny fomba manetriketrika. Nisy ny fanapoahana tafondro miisa in-21, izay natokana handraisana Filoham-pirenena manatanteraka fitsidihana ara-pomba ofisialy. Niara-dalana tamin’izany ny lanonana feno fanajana natolotry ny filoha zambianina tamin’ny arofenitra ara-miaramila. Tetsy ankilan’izay kosa, dia nametraka fehezam-boninkazo teo amin’ny Presidential Memoriam ny filoha Hery Rajaonarimampianina.
Vahiny manan-kaja noraisin’ny firenena zambianina, nanomboka omaly, moa ny filoha Malagasy. Manotrona azy any an-toerana ny minisitry ny Raharaham-bahiny Atallah Béatrice sy ny minisitry ny Varotra Tazafy Armand ary ny Sekreteram-panjakana miadidy ny ministeran’ny Raharaham-bahiny misahana manokana ny Fiaraha-miasa sy ny Fampandrosoana Bary Rafatrolaza. Ny filoha Hery Rajaonarimampiana rahateo no filohan’ny Comesa amin’izao fotoana, ka rariny sy hitsiny raha horaisina amin’ny fomba manetriketrika toy izao.
Mandritra izao fitsidihany ao Lusaka, renivohitry Zambie izao koa no hijeren’ny filohan’ny Comesa dia ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampiana ny toerana hananganana ny foiben’ny Comesa. Marihina moa fa ny firenena zambianina dia efa nanolotra ny tany hanorenana an’izany.
Izao dian’ny filoha izao koa dia tafiditra indrindra amin’ny fanamafisana ny fiaraha-miasan’ny firenena Zambianina sy Madagasikara izay efa niorim-paka nanomboka ny taona 1971 ary nohamafisina tamin’ny alalan’ny fifanarahana vita sonian’ny roa tonta ny taona 2008. “Mampiseho fa te hiara-hiasa sy hanamafy ny fiaraha-miasa amintsika ny firenena zambianina”, hoy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina.
Hahazoan’ny firenena Malagasy tombony tokoa izao fitsidihan’ny filoha ao Zambie izao satria dia maro ny tsena azon’ny mpandraharaha Malagasy hidirana ao anatin’izany. Isan’ireo firenena mpanafatra entana be indrindra i Zambie satria dia ny 90 isan-jaton’ny vokatra jifainy dia hafarany avokoa. Manana tombon-dahiny betsaka amin’izao maha filohan’ny Comesa ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampiana izao ny mpandraharaha Malagasy sy ny firenena Malagasy iray manontolo.